गर्मीमा धेरै हिड्नु हुन्छ ? चाया आउन सक्छ ! यसरी बच्नुस ! – Public Health Concern(PHC)
गर्मीमा धेरै हिड्नु हुन्छ ? चाया आउन सक्छ ! यसरी बच्नुस !
in मेरो स्वास्थ्य : मेरो सरोकार, स्वास्थ्य टिप्स
गर्मी बढ्दै छ । स्वस्थ र सुन्दर अनुहार बनाउन चाहनुहुन्छ भने छाता ओढ्न वा ह्याट लगाउन नबिर्सनुस् । अनुहारलगायत शरीरका विभिन्न भागमा चर्को घामले असर पुर्‍याउन सक्छ ।गर्मीको बेला अनुहारमा कालो पोतो अर्थात् चायाँ आउने समस्याले धेरैलाई पिरोल्छ । वीर अस्पताल, चर्म तथा यौनरोग विभागका प्रमुख प्राडा. भाष्कर मोहन मेहेर कायस्थका अनुसार घाममा हिँडडुल गर्दा सूर्यको प्रत्यक्ष किरणले अनुहारमा असर पुर्‍याउँछ ।
सूर्यको हानिकारक किरणले अनुहारको छालाको कोषलाई क्षति पुर्‍याउँछ । मुहारमा चायाँ देखिन सक्छ । घरबाहिर काम गर्ने महिला एवं पुरुषको मुहारमा चायाँ देखिनुको मुख्य कारण घामको असर नै हो । गुणस्तरहीन सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोगले पनि अनुहारमा चायाँ देखिने हुन्छ ।
Have A Nagging Habit? The Risk Of Infection Can Be High!
अनुहारमा देखिने कालो पोतो हटाउन बजारमा विभिन्न खालका प्राकृतिक लेप, औषधि वा मल्हम पाइन्छन् । त्यस्तै सनस्क्रिन वा सन ब्लकहरू पनि यथेष्ट छन् । आफूखुसी मुहारमा दलेपछि निको हुनु साटो चायाँ फैलँदै गएपछि झन् निराश भएर उपचार गर्नेहरू पनि बढिरहेका छन् । सम्बन्धित विशेषज्ञले छालाको प्रकृति जाँच गरी सिफारिस गरेको क्रिम लगाउनुपर्ने डा. कायस्थको सुझाव छ ।
सुक्खा छाला भएका व्यक्तिहरूलाई लोसनयुक्त चिल्लो खालको क्रिम उपयुक्त मानिन्छ । चिल्लो छाला भएकाहरूले लोसन लगाउँदा डन्डीफोर निस्कने सम्भावना हुन्छ । घामका कारण अनुहार, घाँटीलगायतका भागमा ससाना दाना निस्कने समस्या देखिएको छ । यसलाई घमौरा भनिन्छ ।
त्यस्तै कतिपयलाई पसिनाका कारण फंगलको संक्रमण भई छाला चिलाउने वा अन्य समस्याले हैरान बनाएको डा. कायस्थ बताउँछन् । त्यस्तै दादको समस्या पनि देखिने गर्छ ।
काखीमा पनि चिलाउँछ
गर्मी मौसममा काखी एवं काछमा चिलाउने समस्याले पनि धेरैलाई सताउँछ । नुहाउन अल्छी गर्ने व्यक्तिलाई गर्मीमा काखी एवं काछमा ढुसी हुने जोखिम हुन्छ । ‘काछ लाग्ने समस्या देखिने गरेको छ । फंगलको संक्रमणले यस्तो समस्या हुने गर्छ’, डा. कायस्थले भने ।
काछ वा काखीमा समस्या भएको अवस्थामा चिलाउँछ । खुट्टाका औंलाको कापमा समस्या देखिएमा चिलाउँछ । खुट्टा गन्हाउने हुन्छ । कन्याउँदा छाला रातो हुन्छ । कत्लासमेत देखिन सक्छ । जीउमा संक्रमण भएको अवस्थामा गोलो चक्का जस्तो आकृति बन्छ । भित्र खाली हुन्छ । बाहिर वरिपरि रिङ बन्छ ।
घमौरा आएको अवस्थामा पंखामा बस्नुपर्छ । घमौरा आएको भागमा सफा पानीले भिजाउनुपर्छ । र हावामा सुक्न दिनुपर्छ । रुमाल वा कुनै कपडाले पुछ्नुहुँदैन । पंखा वा एसीमा बस्ने हो भने घमौरा छिटो निको हुन्छ ।
गर्मीमा शरीरबाट पसिना निस्कने भएकाले पहिरनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पसिना सोस्ने भएकाले सुतीको कपडा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । मोजाका साथै सुतीको भित्री वस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने डा. कायस्थको सुझाव छ । अरु खालको पोसाक लगाउँदा पसिना सोस्दैन । ‘पसिनालाई कपडाले सोसेन । छालामा पसिना रहिरह्यो भने ढुसीको संक्रमण हुन्छ । फंगसको कीटाणु सक्रिय हुन्छ’, डा. कायस्थले भने । दिनभरि काम गर्दा आएको पसिना काछमा रहिरहेको अवस्थामा पनि संक्रमण हुन्छ ।
सूर्यका हानिकारक किरणले अनुहारको छालाको कोषलाई क्षति पुर्‍याउँछ । र मुहारमा चायाँ देखिन सक्छ ।
राति सुत्ने बेला भित्री वस्त्र फेर्नुपर्ने डा. कायस्थको सुझाव छ । बिहान लगाएको भित्री वस्त्र राति सुत्दा पनि नफेर्ने धेरैको बानी हुन्छ । सुत्दाखेरी भित्री वस्त्र खोल्नु उपयुक्त हुन्छ । पुरुषले खुकुलो पाइजामा, लुंगी तथा महिलाले पेटीकोट, मेक्सी वा गाउन लगाउँदा पसिना गुम्सिन पाउँदैन ।
कसरी लगाउने क्रिम ?
सनस्क्रिन वा सनब्लक कसरी लगाउने ? यसबारे धेरैजसो पुरुष मात्र होइन महिलालाई समेत जानकारी छैन । गुणस्तरीय सौन्दर्य सामग्री ठीक तरिकाले लगाउँदा अनुहारको छाला सुन्दर र स्वस्थ हुने चिकित्सकहरू बताउँछन ।
मुख धोएपछि महिलाले सुरुमा मोस्चराइजर लगाउनु उपयुक्त हुने कायस्थको भनाइ छ । त्यसपछि सनस्किन क्रिम लगाउनुपर्छ । अनि मात्र बल्ल पाउडर लगाउँदा राम्रो हुने उनले बताए । हत्केलामा क्रिम दलेर मुखमा लगाउने तरिका भने सही नभएको उनको भनाइ छ । यसरी लगाउँदा जति गुणस्तरीय सनस्क्रिन क्रिम लगाए पनि त्यसले काम नगर्ने उनले बताए ।
चिकित्सकहरू सनस्क्रिन क्रिम दिनमा पटकपटक लगाउन सुझाउँछन् । तर नियम पुर्‍याएर क्रिम लगाउने हो भने त्यसले करिब सात घण्टा पुग्छ । पटकपटक क्रिम लगाइरहन पर्दैन ।
क्रिम लगाउनुअघि सुरुमा सफा पानीले मुख धोएर चिल्लोपना हटाउनुपर्छ । हातका दुई औंलामा क्रिम लिएर सोही औंलाले नै अनुहारमा दल्नुपर्छ । बाहिर निस्कने समयभन्दा आधा घण्टाअघि अनुहारमा सनस्क्रिन लगाउनुपर्ने डा. कायस्थको सुझाव छ ।श्रोत
Tags: better to know in healthcare of facechaya potoFacial CareHealth Tipshow to use sun blockSun Burn
Entrance Notice Of Purbanchal University For MPH & M. Pharma
चाया पोतोले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी गरिन्छ उपचार ! सावधानीका उपाय सहित !
के हो डंडीफोर ? कति प्रकारका छन र यस्को उपचार कसरी गर्ने ?
लोकसेवा तयारी गर्नेहरुका लागी आब २०७६/०७७ को बजेटको Quick Review !